အမွှေးမပေါက်တဲ့ မမထားရဲ့ပစ္စည်းလေး – CHAR TAKE
14/09/2021char take0 Comments
ကျနော့်အိမ်က လုံးချင်း တိုက် အိမ်လေးပါ။ တော်တော်လေးလည်းကျယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူက သိပ်မရှိဘူးဗျ။ ကျနော့် အဖေ ရယ် ၊အမေ ရယ်၊ ကျနော် ရယ်၊နောက် ကျနော့်အမေရဲ့ တပည့် မထားရယ်၊ နောက် အိမ်ဖော် အဒေါ်ကြီး ဒေါင်္တင်ရယ်၊ (အမည်အားလုံးပြောင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။)စုစုပေါင်းမှ ၅ ယောက်ထဲပါ။ခြံစောင့်လင်မယားတော့ရှိတယ်။ကိုထွန်းခင် တို့လင်မယားလေ။ခြံထောင့်မှ သပ်သပ်အိမ်ဆောက်ပီးနေပါတယ်။နေ့ဘက်ဆို အဖေကလည်း သူ့ Company ကို သွား၊အမေနဲ့မထားနဲ့လည်း ရွှေဆိုင်သွား၊ကျနော်လဲ ကျောင်းသွားပေါ့။ အိမ်မှာအရမ်းပျင်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ကျောင်းကပြန်ရင်တော့ အခန်းထဲအောင်းပီး ဂိမ်းဆော့ ၊တီဗွီကြည့်၊ စာလုပ်၊ ဒီလိုပါပဲ ၊။
တခါတလေ အော ကားကြည့်ပေါ့။(တခါတလေ မဟုတ်ဘူး အမြဲ ပဲ…ဟီး… .ဟီး……)ကြည့်ပီး ဖီလင်တက် လာရင် သိတယ်မလား ထုံးစံ အတိုင်း ဟန်းပလေး (Hand Play)ပေါ့။ ကဲ့….။ စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ ပထမ ဆုံးပြောရမှာက မထားရဲ့ အကြောင်း ပေါ့ဗျာ။မထား ဆိုတာ ကျနော့် အမေ ရဲ့ တပည့် လေ။ငယ်ငယ်ထဲက မွေးစား ထားတယ်ပြောတာ ပဲ။ကျနော်မမွေးခင် ထဲကပေါ့။မထားရဲ့ အသက် က ကျနော့ ထက် ၁၀ နှစ်လောက် ကြီးတယ်။မထား ကို အမေ မွေးစားထားတာဆိုပေမဲ့ ကျနော် နဲ့ မောင်နှမ လိုတော့ မနေ ဘူး။သူငယ်ချင်းလိုပါပဲ။ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းကဆို မှတ်မိသေးတယ် ၊လူလစ်ရင် ကျနော့်လီးကို လက်နဲ့လိုက် ဆွဲ လို့ ထွက်ပြေးရသေးတယ်။မိရင် ညှစ် တယ်။
နောက်ပိုင်း ကျနော်လဲဘယ်ရမလဲ သူ့နိ့ကို လက်နဲ့ ပြန်ဆွဲတာပေါ့။ခုနည်းနည်း အရွယ်လေး ရောက်လာတော့မှ သိပ်မစတော့တာ။ သူကအပျိူ ကြီးလုပ်မယ်တဲ့ဗျာ။ ယောက်ကျားမယူဘူးတဲ့ ။ ဘာစိတ်ကူး လဲတော့ မသိဘူး။ မထားက အသားဖြူဖြူ ၊နဲနဲဝ တယ်။အရပ် လဲ မြင့်တယ်။တိုတိုပြောရင် ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း ပေါ့။သူ့ကိုအမေ ကတော်တော် ယုံ ပါတယ်။အမေ အရမ်းစိတ်ချ ရတဲ့ လူ ပေါ့ဗျာ။ ရုပ် က အချော ကြီးမ ဟုတ်ပေ မဲ့ မထားက ကြည့်ပျော် ရူ့ ပျော် လောက် ပါတယ်။စီးပွားရေး နဲ့ ပက်သက် ရင မထား တကယ်တော် ပါတယ်။လုပ်ငန်း နဲ့ ပက်သက် ပီး စီမံခန့် ခွဲ့ တာ တွေ ဘာတွေ ဆို ရင် လုံးဝ အကွက် စေ့ ထောင့်စေ့နေတာပဲ။ဒါပေမဲ့ ကျနော်က တော့ မထား က ဒါ ဆို ကျနော် ဟိုဟာ ပဲ။အဲ့လို လုပ် လိုက်ရမှ ကျေ နပ်တာ။ အမေ က သူ့ကို အရမ်းယုံနေတော့ ကျနော့် မျက်စိ ထဲ မှာ ခပ်နောက် နောက် ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျောင်းပိတ် ရက် အတွင်း မှာပဲ။
ဘယ်လ လဲတော့မမှတ် မိတော့ ဘူး။အမေ့ မိတ်ဆွေတယောက် မင်္ဂလာဆောင် တဲ့ ဗျာ။မန်းလေး မှာတဲ့။အဲ့ ဒါ အမေ က ရန်ကုန် မှာ အလုပ် တွေ ရှိတယ်ဆိုပီးမထားကို လွတ်တယ်။ မထားကသူတယောက် ထဲ ဆို မသွား ဘူးတဲ့၊ကျနော် ကိုဘာ ခေါင်္သွားမယ်တဲ့။ကျနော်လဲ ထုံးစံတိုင်းငြင်းတာပေါ့။ မလိုက်ချင် ဘူး၊ဘာညာပေါ့။အမေ က ဘာအလုပ် ရှိ လို့ လဲ မေးရော ပေးစရာ အဖြေ ကမရှိဘူး။ကျောင်းကလဲ ပိတ်ရက် ဖြစ်နေတယ်လေ။နောက် ဆုံးအမေ က မိန်းကလေးတယောက်ထဲ ခရီးဝေးလွတ် လို့မကောင်းဘူးသားရယ် လိုက် သွား ဆို ပီးပြောတော့ မှ နောက် ဆုံးလိုက်သွားလိုက်ရတယ်။နောက် နေ့မနက် လေယဉ် နဲ့ ရန်ကုန်က နေ မန်းလေး ရောက်လာတာပေါ့။မန်းလေး ရောက်ရောက်ချင်း အဲ့ဒီ့ အမေ့ မိတ်ဆွေ အိမ် ကိုရောက် တယ်။အဲ့ဒီ့ မှာ ကျနော့်ရင် ထဲကို တိုးဝင်လာတဲ့ နတ်သမီးလေးနဲ့ တွေ့တာပဲဗျာ။နောက် စုံစမ်းကြည့်တော့် အမေ့ မိတ်ဆွေ ရဲ့ သမီးတဲ့ဗျာ။
ခုမင်္ဂလာဆောင်တာ သူ့ အကိုတဲ့။တော်တော် လှတယ်ဗျာ။တကယ့်ကိုလှတာ။မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတာ ဒါမျိူးလားမသိဘူး။ မျက်လုံးထဲက လုံးဝမထွက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီ့အိမ်မှာပဲ တည်းတာဆိုတော့သူ့ကို နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ရဖို့ ချောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ကံကောင်းစွာနဲ့ ည၈နာရီလောက်မှာပဲ ၀ရန်တာမှာသူထွက်ရပ်နေ တာတွေ့ တော့ ကျနော် လဲ လမ်းလျောက် သလိုလို ဘာလိုလို နဲ့ သူအနားရောက် သွားတယ်။ နောက် သူ့ကို စကားစ ပြောတာပေါ့။ညဘက်ဒီမှာ ပူတယ်နော် လို့။သူ က ကျွန်တော့ဘက် လှည့်ကြည့်ပီး အင်းတဲ့။နောက်ဘာညာ ကွိ ကွ တော်ကီ ပွားကြည့်တာ ပေါ့။ သူနာမည်က လွင်မာ တဲ့။ပြင်ဦးလွင် မှာဘော ဒါ တက် နေတာတဲ့။ခုမှ ၁၀ တန်း တဲ့။
ဒီနေ့ အကို့ မင်္ဂလာဆောင် ရှိလို့ မန်းလေးခဏ ပြန်လာတာတဲ့။မင်္ဂလာဆောင်ပီးရင် ပြင်ဦးလွင် ပြန်သွားရမှာတဲ့။ကျနော်ကလဲ ကျနော့်စာအကြောင်းတွေ၊ ရန်ကုန်က အကြောင်းဘာ၊ညာ ပေါ့။သူစိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တဲ့ အကြောင်းတွေ ရွီး လိုက် တာ သူနဲ့ ကျနော်တော်တော်လေးခင်သွားပါတယ်။နောက်ကျနေ ပီတဲ့ သူ သွားအိပ်တော့မယ်တဲ့။ကျနော်ကလဲ ရန်ကုန်ရောက်ရင်အိမ်လာလည် လေ လို ပြော တော့ သူက လာခဲ့မယ်တဲ့။အော်…. အိပ်ရမဲ့အခန်းအကြောင်းပြောရဦးမယ်။အဲ့ဒီ့ အိမ်ရှင်က အားနာတဲ့ပုံစံတဲ့ ကျနော် နဲ့မထား တို့ကို သမီး တို့မောင်နှ မ ၁ ခန်းထဲ အိပ် လို့ရမလားတဲ့။ဧည့်သည်တွေ များနေ တော့ အခန်းစီစဉ် ပေးဖို့အဆင်မပြေ ပုံ ပါပဲ။ကျနော်က ဘာမှ မပြောရသေးခင် မထားက ရပါတယ် တဲ့…။အဆင် ပြေသလို စီစဉ် ပါတဲ့။သောက်ပလုတ် တုတ် ။ဒီည သူနဲ့ တူတူအိပ် ရမယ်။
ထမင်းစားသောက်ပီး အိမ်ရှင်တွေနဲ့စကားပြောပီး ကျနော်တို့အိပ်ရမဲ့ အခန်းထဲ ကို သွားကြပါတယ်။ဟာ……ကိုတင် ၁လုံးပဲ ရှိတယ်ဂျ။မထားနဲ့ကျွန်တော် ၁ခါ မှ ဒီလိုမအိပ် ဘူး ဘူးလေ။နဲနဲတော့ရင်ခုန်တာပေါ့။မထားကို ကျနော် က မထား နေ့တိုင်းပင်ပန်းတယ်မလား ၊ကျနော် တို့ဒီ ကို ရောက် တုန်းရောက် ခိုက် ပြင်ဦးလွင် သွားကြမလား၊ ဆိုတော့ မထားက အမေ ဆူ လိမ့်မယ်တဲ့။သူ့ မျက်နှာကို ကြည့်ရတာ သွားချင် တဲ့ ပုံ တော့ပေါ င်္တယ်။အမေ ဆူမှာကြောက်လို့ နဲ့ တူ တယ် ။ကျနော် က အမေ ကိုဖုန်းဆက်ပီး ပြောမယ် လေ၊မထားလဲ ပြော ပေါ့။၂ ယောက် လုံးသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အမေ ခွင့်ပြုမှာပါဆိုတော့ သူခဏတွေ ဝေသွားပီး။ မသွားချင်ပါဘူးဟာတဲ့၊ရန်ကုန်မှာ အလုပ်တွေရှိသေးတယ်တဲ့။ကျနော်လဲ တော်တော် ပြောပါ တယ်။
မရ ဘူး။ဇွတ်ငြင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲမသိ၊အပျိူ ကြီးတွေများ တခါတခါ တော်တော် ဇီဇာကြောင် တာပဲ။ကျွန်တော်လဲဘယ်လိုမှ ပြောမရ တော့ နဲနဲ ဘူ သွားတဲ့ ပုံ နဲ့ကုတင် ပေါ င်္မှာ ၀င် အိပ် လိုက်ပါတယ်။မထား ကုတင် ပေါ င်္မှာထိုင်ပီး ကျနော်ကိုသွားမယ် ဆိုရင် အမ စကားနားထောင်ရမယ် တဲ့။အံမယ်။ဒါမျိူးကတိ ဆိုရင် ၁၀ ခါ ပေးတာပေါ့။ပီးရင် ကိုယ်လုပ်ချင် သလို လုပ် တာပဲလေ။ဟိဟိ…..။နောက်တော့ မထား အိပ်တော့တဲ့။မီးပိတ်လိုက် တဲ့ ။ကျနော်လဲ မီးပိတ် ပီး AC ကို Temperature အအေးဆုံးတင် လိုက်ပါတယ်။ကျနော် ကအအေးကြိုက်တဲ့လူလေ။မထားက ဘာလို့အဲယားကွန်းကိုအဆုံးထိတင်တာလဲ တဲ့။အရမ်းချမ်းတယ်တဲ့။ကျနော်ကလဲ အမ ချမ်းရင် ကျနော်ဖက်ထားပေးမှာပေါ့လို့။
အပျိူကြီး ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူး၊ငြိမ်သွားတယ်။နောက် မအိပ်ခင်ဟိုစကားပြော ဒီစကားပြောနဲ့ ပေါ့။နောက် ၁၅မိနစ်လောက်လဲ ကြာတော့ချမ်းလာပီ ကွာ။အဲယားကွန်း ကို နဲနဲ ပြန်လျှော့ တဲ့။ကျနော်လဲ မထား နားကပ်ပီး မထားကို ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။မထားလဲ ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။မထားကိုဖက်လိုက်မိတဲ့အချိန်က စပီးကျွန်တော့ရင်ထဲမှာ အသိ တခုဝင် ရောက်လာပါတယ်။ငါ သူစိမ်း မိန်းကလေး တယောက်နဲ့ အိပ်ယာတခုထဲ ပေါ င်္ မှာတူတူအိပ်နေ ရတာပဲ ဆိုပီးတော့ပေါ့။အဲ့လို အသိဝင်လာတာနဲ့ ကျနော့လီးကမတ်ပီးတောင် လာတာ သတိထားမိလိုက်တယ်။ကျနော်လဲ ပြသနာ တက်မှာစိုးလို့ မထားကိုဖက်နေရာက နေ လက် ကိုပြန်ရုတ် လိုက်တော့ မထားက ဖက်ထားလေ တဲ့။ဒီမှာ ချမ်းတယ် တဲ့။အောက်မှာလီးတောင်နေတာ သူမှ မသိပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ ကျနော် လဲ မထားကို ဆက် ဖက် ထား လိုက်တယ်။
မထားရဲ့ မျက်နှာလေး က ကျွန်တော်ဘက် ကိုလှည့်လာတာနဲ့ မထားရဲ့ ပါးလေး ကို ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်တယ်။မထားက အံသြ သွားတဲ့ ပုံစံ နဲ့ ဘာလို့ နမ်းတာလဲ တဲ့။ရန်တွေ့တဲ့ ပုံစံမျိူးပေါ့။ကျနော် ချစ် လို့ နမ်းတာ လို့။အပျိူကြီး မမ ရင် ခုန် ပီး ရှက်သွားလား မသိဘူး။ဟို ဘက် ကို တခါထဲ ပြန်လှည့်သွားရော။ကျနော် နှလုံးက တော်တော်ကို တုန်နေတာ ဗျာ။ဖွဲ့နွဲ့ ပီးပြောရင် ရင်ခုန်တာပေါ့။မထားက ဒီဘက် ပြန်လှည့်ပီးအိပ်တော့တဲ့။ကျနော်က အိပ်လို့မပျော် ဘူး အမ။အိပ်ယာပျောင်းအိပ်လို့ နဲ့ တူတယ်။ ကျနော် မထားကို သွေးတိုးစမ်းတဲ့အနေနဲ့မထားကိုဖက်ထားတဲ့ လက်ကို အောက်နဲနဲ လျှော့ချ ပီး မထားရဲ့ဗိုက် သားလေးကိုဖွဖွလေး ပွတ်ပေးကြည့်ပါတယ်။အရမ်းအရမ်းလဲ မလုပ်ရဲဘူးလေ။နောက် ပြသနာတက်မှာစိုးလို့။မထားက ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ အခြေအနေ နဲနဲ ကောင်းတယ်ထင်တယ် ထမိန် ကြားထဲကို လက်လျှိူဝင်ပီး မထားဗိုက် ကို ပွတ်ပေးကြည့်ပါတယ်။အဲ့……။တွေ့ ပီ….။
အပေါက်လေး….။ မထားရဲ့ ချက်လေးပါ။ မထားရဲ့ ချက် လေး ကို စမ်းကြည့် ရင် မထားတော့အိပ်ပျော်သွားပီထင် ပီး မထားလို့ အသံ ခပ် အုပ်အုပ် လေးနဲ့ ခေါ်င်္လိုက် တော့ မထားကဘာလဲတဲ့။ပြန်ထူးတော့ကျနော်လဲ လန့်သွား တာပေါ့။ဘာပြန်ပြောရမလဲ မသိ ဖြစ်သွားတယ်။ေ နာက်မှ မထား ရဲ့ ချက် ကလေး ကို လက် နဲ့စမ်း ထားတာသတိရတော့ ကျနော်က အမ ချက်ပေါ င်္မှာ ကျနော် လက် မှတ် ထိုးပေးလိုက်မယ်၊ပိုက် ဆံ ထုတ်လို့ ရတာပေါ့။ မထားက ကြောင် ပီး ဘာလဲ တဲ့။ ကျနော်က ချက် ပေါ င်္ မှာ လက် မှတ် ထိုးတော့ ချက် လက်မှတ် ပေါ့ လို့ပြောပီး ကျနော် ပဲ အရင် ရီ လိုက် ပါတယ်။မထားလဲ လိုက်ရီ ပီး နင့်ယောက်ခမ ဘဏ် မှာပဲထုတ်လို့ ရမှာတဲ့။ကျနော် လဲ သူပြောတာကို အလိုက် သင့်လိုက် ရီပေးလိုက်ပါတယ်။ကျနော်စိတ်ထဲမှာသိလိုက်တာတော့တော်တော် အခြေအနေ ကောင်းနေပီ လို့ ထင်မိပါတယ်။ကျနော့်လီးက လဲတော်တော့်ကိုတောင်နေတာလေ။
မထား နဲ့ ဘေးမှာအိပ်နေတာဆိုတော့ မထားပေါင် ကို သွားထောက်မိနေတာပေါ့။မထားလဲ သိ လားတော့ မသိဘူး။ကျနော့်လက်က မထားရဲ့ ချက် အောက် ကို နဲနဲ ဆက်ဆင်းကြည့်တော့ မထားက ကျနော့်လက် ကို အမြန်မြန် ဖမ်းကိုင် လိုက်ပါတယ်။ပီးတော့ကျနော့ ဘက် ကို့လှဲ့ လိုက် ပီးဘာလုပ်ဖို့လဲ တဲ့။ ကျနော် လဲ ဒီအခြေအနေရောက် မှ မထူးတော့ဘူး ထပ် စွန်းစားကြည့်တာပေါ့ လို့ဆုံးဖြတ် ပီး မထားကို အမ ဟိုဟာကို ကိုင် ကြည့်ချင်လို့ လို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ မထားက မကိုင်ရဘူး တဲ့ ၊အိပ်တော့တဲ့။ကျနော်က လဲ မထားနဲ့ ကျနော် နဲ့ ၂ယောက်ထဲပဲသိတာပဲ။ဘယ်သူမှသိတာမှ မဟုတ်တာ။ခဏလေးပဲကိုင်ကြည့်ချင်လို့ ဆိုတော့ မထား က မကိုင်ရဘူး တဲ့။ရှက်စရာကြီး တဲ့။ကျနော်က အော်…. မထား ကရှက်နေတာလား၊ဒါဆို မထားအိပ်ပျော် သွားတဲ့ အချိန် ကြမှ ခဏလေးကိုင် ကြည့်မယ်နော် လို့ ပြောတော့ မထားက လူဆိုးလေး တဲ့၊ပြောလို့လဲ မရဘူး တဲ့။
ငါ ဒီည မအိပ်တော့ဘူးတဲ့။ကျနော်လဲ ပြန် ပီးတော့ မထားကိုပြောလိုက်တယ်။ကျနော် လဲမအိပ်ဘူး လို့။မထားအိပ်မဲ့ အချိန်ထိစောင့် မယ်လို့။အဲ့လိုပြော ပီးတော့ ၂ယောက် သားတိတ် ဆိတ် သွားပါတယ်။စကားလည်းဆက်မပြောဖြစ်တော့ဘု။၁၅ မိနစ်လောက်နေတော့မထားကို အကဲခတ်မိတာ အိပ်ချင်နေတဲ့ပုံပဲ။နောက် ၁၀ မိနစ်လောက်နေတာ့ မထား လို့ တိုးတိုးလေး ခေါ င်္လိုက်တယ်။မထားကပြန်မထူး ဘူး။အိပ်ပီးထင်တယ် ဆို ပီး မထား ရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကို ထမိန် ပေါ င်္ကနေကိုင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မထား တချက် တွန့်သွားတယ်။ကျနော်ကလန့်သွားတာပေါ့။မထားနိူးသွားတာလားလို့။နိူးတော့မနိူးသေးဘူး။မထားရဲ့ အဖုတ် လေးကို ထမိန်းအပေါ င်္ကနေ ပဲ ပွတ်ပေးနေတယ်။ကြားဖူးသလောက် အပျိူတွေ ဆောက်ဖုတ် မှာ အမွှေးတွေ ပေါက် ကြတယ်တဲ့။
မထားကြတော့ အမွှေးမပေါက်တဲ့ပုံပဲ။ထမိန်ပေါင်္က ကိုင်ကြည့်တော့အဖုတ်ကချောနေတယ်။သေချာသိအောင့်ထမိန် ကို တခါထဲ လှန် လိုက် ပီး မထားရဲ့ ဆောက်ဖုတ် လေးကို ကိုင်ကြည့်တော့မှ အမွှေးကတော့ မပေါက်ဖူးနဲ့ တူတယ်။ပြောင်နေတယ်။ချောနေတာ က မထားရဲ့ အဖုတ်ကြားထဲကနေ ချွဲကျိကျိ အရည်တွေထွက်နေလို့ ချောနေတာ။အော်…..။ကျနော် သိသွားပီ။မထား မအိပ်သေးဘူး။အိပ်ချက်ယောင်ဆောင်နေတာလေ။ မထား မအိပ်မှန်းသိတာနဲ့ မထား ရဲ့ ထမိန်းကို ကွင်းလုံးချွတ် လိုက်ပါတယ်။အောက်က ဆက်စပိုင်နာလေးကို လဲ မရရ အောင် ဆွဲ ပီးချွတ် လိုက်ပါတယ်။မထားလား။မနိူးတော့ဘူးလေ။အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့သူ မဟုတ်လား။ မထားရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ကြည့်ပီး အောကားတွေထဲက လို ဘာဂျာမုတ်ပစ်လိုက်ချင်တာ။ဒါပေမဲ့ နဲနဲ ရှိန်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။မထားရဲ့ အပေါ် င်္ ပိုင်း အိမ်းကျီ ရော ဘောလီ ပါ မရရအောင် ခက်ခက် ခဲခဲ ချွတ် လိုက်ပါတယ်။
မထား တယောက်တော့ လုံးဝ က မိမွေးအတိုင်းပကတိ အနေအထားဖြစ်သွားပီလေ။ မထားရဲ့လုံးဝိုင်းနေတဲ့နို့သီး ခေါင်းလေးတွေကို နိ့ဆာနေတဲ့ကလေးတယောက် လိုမျိူးကောင်းကောင်းကြီးစုတ်လိုက်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုချေလိုက် နဲ့ ။ နို့အုံတခု လုံးကို နယ် လိုက် လုပ်ပေးတော့ မထားဆီးကနေ ညည်းသံသဲ့သဲ့ လေးကြားလိုက်ရတော့ ကျနော် စိတ်ထဲမှာပိုရဲတင်းလာသလိုမျိူးပဲ။အောက်ဆင်းပီး မထားရဲ့ အမွှေး မပေါက် တဲ့ ဆောက်ဖုတ် ပြောင်ပြောင် ကြီးမှာ တော့ အရည်တွေကြနေတာ ရေတံခွန်ကနေ ရေတွေစီးကြ နေတဲ့အတိုင်းပဲ။ကျနော်လဲ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော့ ကွာဆိုပီး မထားရဲ့ အဖုတ် လေးကို ဘာဂျာမှုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မထားရဲ့စောက်စိလေးကို အရင်စ စုတ်ဖို့ စောက်စိ လေးကို လိုက် ရှာတာ ဟိုးအထဲရောက်နေတယ်။မထားက နဲနဲဝတော့ စောက်ဖုတ်အသားတွေကပြည့်နေတော့ စောက်စိ လေးက အထဲရောက်နေတာပေါ့။ မထားရဲ့ စောက်စိ လေးကို စစုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့မထား ဖင်ပါကော့တက်သွားပါတယ်။လျှာဖျားလေးနဲ့ စောက်စိလေးကို ပွတ် ကစားတော့ မထား လုံးဝဟန်ဆောင်လို့မရတော့ပါဘူး။
မထားရဲ့ညည်းသံတွေကလဲ တစစ ကျယ်လာပါတယ်။ကျနော် မထား ရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ၁၅မိနစ်လောက် အားရပါးရ ဘာဂျာပလေးလိုက်တာ မထားက စကားပြောလာပါတယ်။မောင်လေးတဲ့ တော်ပီတဲ့ ၊ကျနော့်ကို တားလို့မရမှန်းသိတော့ သူက ဒီနေ့ တော်တော့လေကွာတဲ့။သူများအိပ်ယာပေါ် င်္မှာအရည် တွေပေကုန်ပီ တဲ့။သူတို့သိသွားကြမယ်တဲ့။နောက်နေ့ပြင်ဦးလွင်သွားမှ ပဲဆက်လုပ်တဲ့။လိမ်မာတယ်နော် တဲ့။ကျနော် ကလဲ သူပြောတာ မှန် တာကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ရောက်ရင် တကယ်နော် လို့ဆိုတော့ ၊မထားက ကတိ တဲ့။မထားတော့ ကျနော်လျှာ နဲ့ အစွမ်းပြလိုက်တာ တော်တော် ကြွေသွားတယ် ထင်တယ်။ အဲ့ဒါ နဲ့ကျနော် လဲ မထားဘေးမှာပြန် လှဲအိပ်လိုက်တာပေါ့။ပီးတော့ မထား ကို ကျနော့် ဟာလေး ကိုင်ကြည့်ပါလား ဆိုတော့ မထားက ဟာ……မကိုင်ချင်ဘူးတဲ့။သူ့ လက်ကလေး တွေ ကို ယူပီးကျနော့်လီးပေါ င်္တင်ပေးလိုက်တော့သူက ကိုင်ကြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့သံချောင်းကြီးကြနေတာပဲ တဲ့။မာမာတောင့်တောင့် ကြီးတဲ့။
အဲ့ဒါ ကျနော်က မထားရဲ့ စောက်ဖုတ် အပေါက်လေးကိုလက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်ပီး တော့ ဒီ အချောင်းကြီးနဲ့ ဒီအပေါက် လေးထဲကိုဆန့်ပါ့မလားဆို တော့မထားက ပေါက်ကရတွေ တဲ့။သွား……အိပ်တော့တဲ့။ဒီတခါတော့ မထားစကားကိုနာထောင်လိုက်ပါမယ်။အိပ်ပီဗျာ………..။ နောက်နေ့ မနက် ကျနော်အိပ်ယာက ထ တာ နဲနဲ နောက်ကျသွားတယ်။၈ နာရီခွဲလောက်မှ နိူးတယ်။မထားကျနော့်ကို လာနိုး တယ်။အိပ်ပုတ် ၊ထတော့ တဲ့။ကျနော် ကလဲ နိူးနိူးချင်းမထားရဲ့လက် ကလေးကို ဖမ်းဆွဲပီး ကျနော့်ရင် ခွင် ထဲ ကို မထားရဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ဆွဲ ပွေ့ ပြီး ချစ်လား လို့ မေးလိုက် တော့ မထား ကဘာမှ ပြန် မပြောဘူး။ကျနော် လဲ မထား နှတ်ခမ်းလေး ကိုအားရပါးရ kiss ဆွဲ လိုက် တယ်။မထားက သွားလဲမတိုက်ရသေးဘူး။အာပုတ်ကြီးနဲ့။ညစ်ပတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ကျနော် က ရွံလို့လား ဆိုတော့၊မထားက မရွံပါဘူး တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့ ကျနော်ကမေးတော့ နားနားမှာကပ် ပီးတိုးတိုးလေးပြောတယ်၊ချစ်လို့တဲ့။
မနက် ရေမိုးချိူး breakfast စားပီး အမေ့ဆီကိုဖုံးဆက်တယ်။၂ယောက် လုံးပြင်ဦးလွင် သွာချင်တယ် ဆို တာနဲ့ သဘောကောင်းတဲ့ ချစ်မေမေ က ခွင့်ပြုတယ်လေ၊အကြာကြီးတော့မနေနဲ့တဲ့။၄ ရက် ၅ ရက် လောက်ပဲ နေတဲ့။ဒီနေ့ နေ့လည် ဧည့်ခံပွဲပီးတာနဲ အဆင်သင့်ထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။ကျနော် ရော မထားရော ညားခါစ လင်မယားတွေလိုပါပဲ တယောက်နဲ့ တယောက် အကြင်နာ တွေ ပြိုင် လို့ ပေါ့။လောက ကြီးက လဲနော် တော်တော် လှဲ့စားတတ်တာပဲ။မနေ့ကပဲသူငယ်ချင်းလို၊မောင်နှမ လိုနေကြတာ။ဒီနေ့တော့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်လို့။မင်္ဂလာပွဲ သွားပီ လက်ဖွဲ့ပေးတယ်။စားစရာသောက်စရာတွေ မြန်မြန်စားသောက် ပီး မန်းလေးကနေ ပြင်ဦးလွင်ကို ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ van ကားလေးနဲ့။ကားမောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးက လဲ လေယဉ်မြန် မောင်းတဲ့ သင်တန်းတေ ဘာတွေ တတ်ထားလားမသိဘူး။တော်တော် မောင်းတာ ခဏလေး နဲ့ ပြင်ဦးလွင် ရောက် လာခဲ့ တယ်။ဟိုတယ်ကောင်းကောင်းတခုမှာ ၂ယောက်ခန်းတခန်းယူလိုက်ပီး အခန်းထဲဝင်ခါနီးမှ မထားက ကျနော့ကို တိုးတိုးလေးပြောတယ်။ကြောက်တယ်တဲ့။ဘယ်သူ့ကိုကြောက်တာလဲ၊မေးတော့ကျနော့်ကို တဲ့။
ကျနော်က လဲ မမထားကလေ ကိုယ်လုံး ကိုမှ အားမနာ ဘူး၊ကျနော့်ထက် ၂ ဆ လောက် ၀တာ ကို ကျနော့်ကို ဘာကြောက်နေတာလဲ ဆိုပီး ဖြေသိမ့်ပေးလိုက်တယ်။နောက် နှစ်ယောက်လုံးရေမိုးချိူး ပီး အနွေးထည်တွေ၊ဆွယ်တာတွေ သွားဝယ်ကြတယ်။မထားနဲနဲစိတ်ပျော် သွားပုံရတယ်။ဟိုတယ် ပြန်ရောက်တော့ည၇ နာရီ ထိုးခါနီးပီ။ကျနော် တို့လဲ စောစော စီးစီးထမင်းသွားစားလိုက်ကြတယ်။မထားပျော် အောင် သူစားချင်တဲ့ ဟာတွေ ဘဲမှာကျွေးတယ်လေ။တရောက်နဲ့ရောက်ခွံကျြွေးကြတာ အရမ်းပျော်ခဲ့ကြပါတယ်။စားသောက်ပီး ဟိုတယ် ပြန်ရောက် တော့ ည၈နာရီ ထိုးပီ။မထားက အ၀တ်အစားတွေလဲနေတယ်။ကျနော်တော့ ဘာမှ လဲမနေတော့ဘူး။အရမ်းလဲအေးနေတာကို စောင်ချူံနေလိုက်တယ်။မထားက အ၀တ်အစားလဲပီးတော့ ကျနော့် ကို တယောက် ထဲ ကွေးနေတယ်ပေါ့။ဟိုဘက်တိုး အမ လဲ အရမ်းချမ်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ဂွမ်းစောင် အထူကြီးထဲမှာ ၂ယောက် လုံးကွေးပီး5Series က လာတဲ့ ကိုးရီးယားကားကိုကြည့်နေတယ်။မထားက တော့်ကိုးရီးယားကားကြည့်နေတာပေါ့။ကျနော်ကတော့ မထားကို ဘယ်လိုစရ မလဲချောင်းနေတာ။မထားက ကျနော် ချောင်းနေတာ သိလို့ပဲလား အေးလို တမင် အုပ်ထားတာလား တော့မသိဘူး။သူ့စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ကလေးတွေ နဲ့ အုတ်ထားတယ်။
ခဏနေတော့ သူ့လက်ဖယ်တာ နဲ့ အသာလေး သူ့စောက်ဖုတ် လေးကို ကျွန်တော် အုတ်ကိုင် လိုက်ပါတယ်။ကျနော့်ဆီ ဘေးစောင်းတချက် လှည့်ကြည့်တော့ ကျနော်လဲ အရှက်ပြေရီ ပြပီး ချမ်းတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ်။သူက TV ဆက်ကြည့်နေပါတယ်။ကျနော် ကတော့ သူ့ဆောက်ဖုတ်လေးကို လက် ကလေးတွေနဲ့ ပွတ်သပ်ရင်း မထား ကို နားထဲ မှာတိုးတိုးလေးပြောလိုက်တယ်။ချစ်ချင်တယ်လို့။မထားက ကျနော့်ကို ချစ်ပေါ့ တဲ့။ဘယ်သူက တားနေလို့ လဲတဲ့။စောင်ကို ခွာပီး။မထားရဲ့ ထမိန်းကို လှန် လိုက် တယ် ။မထားတော့ဒီည အလိုးခံရ မှာ သိလို့လားမသိ ဘူး။အောက်ကပင်တီ တောင် မ၀တ်ထားဘူး။ခုဏ လက်ကလေးနဲ့ကလိထားလို့ မထားစောက်ဖုတ်လေးမှာ အရည်လေးတွေ စို့ နေပီလေ။မနေ့ကမှောင်မှောင် မဲမဲ ထဲမှာ မထားရဲ့ ဆောက်ဖုတ်လေးကို မမြင်ရဘူး။ဒီနေ့ မီးချောင်းအလင်းရောင်အောက် မှာ ဆိုတော့မထားစောက်ဖုတ် လေးက ဖူးပီး ၀င်းမှဲ့နေတဲ့အသီးတလုံးအတိုင်းပါပဲ။အလင်ရောင် ထဲ မှာ ဆိုတော့ မထား ရှက်နေတယ် ။
ကျနော် တော့ မ ထားစောက်ဖုတ်ကို မနေ့က လို မျိူး ဘာဂျာကောင်းကောင်းဆွဲ ပေးလိုက်တာ ၁၀ မပီး ။တော်တော့ကွာ ၊တော်တော့။ကျနော် လဲ ပိုကောင်းအောင် လျှာဖျားလေးနဲ့ စောက်ဖုတ်နှတ်ခမ်းတွင်းသားထိ ဆွဲလျှက်ပေးလိုက်တာ ဆောက်ဖုတ် ထဲက နေ မီးတောင်ထိတ်ကချော်ရည် ပူတွေ ပန်ထွက် သလိုမျိူး မြင်မကောင်းအောင် ပန်းထွက် လာလိုက်တာ ကျနော့်မျက်နှာတွေ ဘာပေကုန် တယ်။မျက်နှာတွေပါပေကုန်တော့ မထားကျွန်တော့ကို တော်တော် အားနာသွားတယ် နဲ့ တူတယ်။ကျနော်က တော့ အမြန် မြန် ရေချိူးခန်းပြေးပီး မျက် နှာ ကို သေချာဆေးလိုက်ရတယ်။ပီးတော့ မထားဆီ ပြန် လာတော့ ဆော်ရီ မောင်လေးရာ တဲ့၊ဘယ်လိုမှ ထိန်းလို့မရတော့ဘူး တဲ့။တောင်းပန်ပါတယ်နော်တဲ့။ကျနော်က လဲ တကယ်တောင်းပန် ချင် ရင်ကျနော့်ကိုလဲခုဏက လို ပါစပ် နဲ့လုပ်ပေး ဆို တော့ သူက မလုပ် တတ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဆို မမ ပါစပ်ဟ ဆိုတာ နဲ့ သူ့ပါစပ်ကို ဟ ထားပါတယ်။
ကျနော်က ဘောင်းဘီချွတ်ပီး သူ့ပါစပ်ထဲ ကို လီးထိုးထဲ့ တယ်။လုံးဝမငြင်းရှာပါဘူး။မမ ရေခဲချောင်းစုတ် သလိုစုတ်ပေးထားလေ။။ ကျနော်လဲ ကောင်းကောင်း မထားရဲ့ပါစပ် ကိုကောင်းကောင်းလိုးပေးလိုက်တာအရမ်းဖီးဖြစ်ပီး ရှေ့ပြေးအရည်ကြည် လေးတွေထွက်လာတဲ့ ထိပါပဲ။မထားက ဘာတွေ လဲတဲ့ ငံကျိကျိ နဲ့တဲ့။ကျနော်က အချစ်ရည်တွေလို့။တော်ပီမထားမစုတ် နဲ့ တော့ လို့ ဆို ပီး မထားရဲ့ ပေါင် ၂လုံးကြားမှာဝင်ထိုင်ပီး မထားရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို ကျနော့်လီး နဲ့ လျှောတိုက်ပီးပွတ်ပေးနေတော့ မထားမျက်လုံးလေးကမှေးစင်းသွားတယ်။မထားရဲ့ ပေါင် တုတ်တုတ် လေ တွေ ကို အားကုန်ဖြဲ ပီး မထားရဲ့ အဖုတ် လေးထဲကို လီးဒစ် မြုပ်ယုံလောက် သွင်းကြည့်တယ်။မမ နာလား ဆိုတော့ သူက့ နဲနဲ နာတယ် တဲ့။ နောက်လက်တဆစ်လောက် သွင်းတော့ ထပ်သွင်းလို့မရတော့ဘူး။ တခုခုထောက်နေသလိုမျိူးပဲ၊ ကျနော် လဲ ဘာလုပ်ရမှန်းလဲမသိတာနဲ့မထားကိုပဲမေးလိုက် တယ်။ မမထား ထပ်သွင်းလို့ မရတော့ဘူးလားလို့။ မထားကအားနဲနဲထဲ့ ပီး ဆောင့်လိုက် တဲ့ မျက်လုံးမှိတ် ပီးမှိန်းနေရကနေပြန်ဖြေ တယ်။ ကျနော် လဲ ဆောက်ဖုတ်ဝကိုသေချာချိန်ပီးအားကုန်းတချက် ဆောင့်လိုက် တာ မထားခင်မျာအံကို တင်းတင်းကြိတ် ပီး၊မျက်နှာကလေး တခါထဲ ရဲသွားတာပဲ။
သူများတွေကြားမှာ စိုးလို့ထင်တယ် အသံတချက်မှ မထွက်ဘူး။ကျနော်လီးတန် အဆုံးထိ ၀င် သွားတော့မှ နာလိုက်တာ မောင်လေရယ်တဲ့. ကျနော် လဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လေး ဆောင့်ပေးနေတယ်။ ၅မိနစ်လောက်ထိ။မ ဘယ်လိုနေသေးလဲလို့မေးတော့ ဘာမှ ပြန်မဖြေ တော့ဘူး။လုံးဝဇိမ်တွေ့သွားပီနဲ့တူ တယ်။ တဖြည်းဖြည်းဆောင့်လိုးနေရင်က နေ မြန် မြန် ဆောင့် တော့ မမထားကောင်းနေတဲ့ ပုံပါပဲ။သူ့စောက်ဖုတ်လေး ကို တချက် ငုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော် လန့်သွားတယ်။သွေးတွေ အများကြီးပဲ။မမထား သွေးတွေ ထွက်နေတယ် သိလား ဆိုတော့၊သိတယ် တဲ့။အမ ရဲ့ အပျိူရည် ကို မိနစ်လောက်ကြာတော့ ကျနော့ ခေါင်းကွိုအိပ်ချင်ယောင်မဆောင်တော့ပဲ မောင်လေးကိုပေးလိုက် ရ လို့ ကျေနပ်တယ်တဲ့။ ခပ်မှန်မှန်လေးဆောင့်ပေးနေရာကနေ မြန်မြန်လေးဆောင့်ပေးလိုက်တာ မိနစ် ၂၀ လောက် ကြာတော့ သူ ရော ကျနော် ရော ပြိုင် တူပီးကြပါတယ်။၂ ယောက် လုံးပီးတော့ ကျနော် ကမေးလိုက်တယ် မမထား။ကျနော် ကို ချစ်လား ဆိုတော့ အရမ်းချစ်တယ်တဲ့။ဒါဆိုခဏလေးနော် ဆိုပီး ကျနော် တစ်ရူး ယူပီး မထား အဖုတ်မှာ ပေနေတဲ့ သွေးတွေ ရော သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက ထွက် တဲ့ အရည် ရော။
ကျနော့် လီးကထွက်တဲ့ အရည်တွေရော ကြင်နာယုယစွာ သုတ်ပေးလိုက် ပါတယ်။ မထား အဖုတ် က နီးရဲ ပီးရောင် ကိုင်နေသလိုလို ပါပဲ..။အဲ့ဒီ့ ညက ည၂ နာရီခွဲ ထိ လိုးကြပါတယ်။၆ချီ လောက် ရှိမယ်။နောက်နေ့ တွေ ကြတော့ ထမင်းစားချိန်ကလွဲ ပီးတချိန်းလုံး ဆွဲ တာ။ပြင်ဦးလွင်ရောက် ပီးဘယ်မှ မသွားဖြစ်ပါ။တည်းခို ခန်းမှာ တနေကုန်တညလုံး မမထားနှင့် ၂ယောက် ထဲ ကြားဖူးသမျှလိုးနည်းပေါင်းစုံကို စမ်းလိုက် အသစ် ထွင်လိုက် နဲ့။မမထားတော့ ကျနော် လုပ် သမျှအကုန် လုံးခံရှာပါတယ်။ပြင်ဦးလွင် မှာ ၅ရက် နေခဲ့ တယ်။အဲ့ဒီ့ ၅ရက် မှာ မမထားနဲ့ အကြိမ်၅၀ ကျော်လောက်လိုးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ မထားကထုံးစံ အတိုင်း မိုးလင်းတာ နဲ့ ဆိုင်သွား မိုးချူပ်မှ ပြန်ရောက် တော့တွေ့ချိန် နည်းသွား တယ်။ဒါပေမဲ့ ကျနော့်လျှာစွမ်းကိုကြွေ နေတဲ့ မထားတော့ညဘက် လူတွေ အားလုံးအိပ် ပီ ဆိုရင်တော့ ကျနော့်အခန်းထဲ ရောက်ရောက် လာပီး အလိုးခံ တယ်လေ။နေ့တိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။၁ပတ်မှာ ၃ ရက်လောက်ကတော့ ကျနော့် ဆီ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။(ပြီး) Crd